आइसोलेशनबाट बिरामी नै बेपत्ता के हो बास्तबिकता हेर्नुहोस – च्यालेन्ज नेपाल
आइसोलेशनबाट बिरामी नै बेपत्ता के हो बास्तबिकता हेर्नुहोस
challengenepal October 8, 2020 1 min read
च्यालेन्ज नेपाल उदयपुर २२ असोज ।
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्री-आइसोलेशनबाट शुक्रबार देखि एक बिरामी बेपत्ता भएका छन् । प्रि आइसोलेशनमा रहेका बिरामी बेपत्ता भएको बिरामीका भाइ हनिफ महम्मदले जानकारी दिएका छन् ।
तनहुँको ब्यास नगरपालिका वडा नं ३ दमौली घर भएका ४१ वर्षीय बसिर अहम्मद मियालाई ज्वरो आए सँगै उनलाई दमौलीकै एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । दमौलीको अस्पतालले उनलाई पश्चिमाञ्चल अस्पताल लैजान रिफर गर्याे ।
बिरामी लिएर पोखरा आएका उनका आफन्त पीसीआर चेक नगरि कुनै पनि अस्पतालले भर्ना नलिने भने पछि कहिले चरक हस्पीटल त कहिले पश्चिमाञ्चल अस्पताल भौतारिनु पर्याे । चरक अस्पतालको आइसोलेशनमा राख्दा दैनिक १५ हजार रुपैया खर्च लाग्ने भएपछि उनीहरु बिरामी लिएर बिहीबार पुनः पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल नै पुगे । बहिवार बिरामीलाई पश्चिमाञ्चल अस्पतालको प्रि आइसोलेशन वार्डमा उनकी श्रीमतिले लिएर गएकी थिइन ।
अस्पतालको प्रि आइसोलेशनबाट बसिर अहम्मद कसरी बेपत्ता भए ? उनी हाल कहाँ छन ? उनको अवस्था के छ ? हाल कसैलाई पनि थाहा छैन । उनले प्रयोग गरेको मोवाइल हाल सुतेको बिस्तारामा छोडेर गएका छन । परिवारका अनुसार बिरामी आफै डराएको अवस्थामा रहेको कारण अन्य कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताए । प्रि आइसोलेशनबाट बिरामी निस्किएर जाँदा पनि कसैले वास्ता नगर्नु अस्पतालको कमजोरी रहेको आफन्तको भनाइ रहेको छ ।
यस बिषयमा अस्पताल प्रशासनले भने प्रहरीलाई खबर गरिएको र खोजी कार्य भैरहेको जनाइएको छ । २ जना स्वास्थ्यकर्मी र १ जना कार्यालय सहयोगी रहेको ठाउँबाट केही नभनी बिरामी कता गए भन्ने एकिन नै भएन , अस्पताल प्रशासन बताउँछ । यसरी अस्पतालको प्रि आइसोलेशनबाट बिरामी हराउन थाले पछि यसको जिम्मा कस्ले लिने ?
Tags: #challengenepal #challengeonlinetv #latest news aajkopost Challenge nepal challenge online tv corona news covid19 dainikrasifal Gopal pakhrin gopalpakhrin kulman ghising latestnews lockdown news news24 online tv puny gautam Todays news todaysnew vagye neupane अन्लाइन खबर आजको खबर आजको राशिफल कुलमान घिसिङ्ग कोरोना अपडेट कोरोना खबर गोपाल पाख्रिन गोपालपाख्रिन च्यालेन्ज च्यालेन्ज अन्लाइन टिभी च्यालेन्ज नेपाल च्यालेन्जअन्लाइनटिभी च्यालेन्जनेपाल ताजा खबर तात्तातो खबर दैनिक राशिफल बिरामी बेपत्ता भाग्य न्यौपाने लक्डाउन बिशेष खबर सिसिर भण्डारी
Previous कोरोनाबाट बच्ने उपायहरु थाहा पाउनुहोस पुरा भिडियो सहित..
Next काठमाडौ भित्रिने र बाहिरिनेलाई आयो नयाँ नियम यस्तो छ पुरा विवरण हेर्नुहोस